के सिक्ने समुद्रबाट [लक्ष्मणरेखा] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
के सिक्ने समुद्रबाट [लक्ष्मणरेखा]
२०७७ पुष २८, मंगलवार ११:०४ गते
जन्मनासाथ नाम हुन्छ । मान्छेको पनि जन्मनासाथै नाम दिइन्छ किनकि जीवन व्यवहारका लागि पनि नाम नभई हुँदैन । खोलानालाका पनि कति नाम हुन्छन् तर बिस्तारै ती सबै छुट्दै जान्छन् । मानौँ कतै पहाडमा एउटा पानीको मूल पलायो र त्यहाँबाट पानीको एउटा धार बग्न थाल्यो । त्यो धारलाई मान्छेले कुनै नाम दिए । त्यो धार बग्दैबग्दै नजिकको एउटा सानो खोलामा गएर मिसियो । त्यसपछि ऊ खोलो भयो र उसको पुरानो नाम हरायो । त्यो खोलो पनि बग्दैबग्दै त्रिशूलीमा आएर मिसियो । खोलाको नाम पनि हरायो र उसले नयाँ त्रिशूली नाम पायो ।
त्रिशूली पनि बग्दैबग्दै कालीगण्डकीसँग मिसिन पुग्यो र नारायणीमा बदलियो । नारायणीको पानीबाट अब काली र त्रिशूली नदीको पानी छुट्टयाउन नसकिने भयो । नारायणी पनि बग्दैबग्दै गयो र भारतको अर्को कुनै नदीसँग मिसियो । त्यसपछि त्यसको नाम फेरि बदलिएर नयाँ भयो । एकपछि अर्को गर्दै नदीले अनेक नामहरु जोड्ने र छोड्ने गरिरहन्छ । अन्ततः फेरि नयाँ नाम लिएर बग्न सुरू गरेको नदीले समुद्रमा पुगी समुद्रको नाम पाएर जीवनलाई धन्य बनाएको हुन्छ ।
समुद्रमा विश्वका कुनाकुनाबाट नदीहरु आएर मिसिएका हुन्छन् । नदीहरुले बगेर आउँदा अनेक रङ लिएर आएका हुन्छन् । अनेक रुप लिएर आएका हुन्छन् । समुद्रमा गएर खोज्दा कुनै पनि नदीको पुरानो रुप र रङ भेट्न सकिँदैन । समुद्रमा के हुँदैन ? सबैथोक हुन्छ । संसारका सर्वाधिक महँगा वैभव पनि यहीँ भेटिन्छन् । सबै सीमाहरुलाई भत्काएर नै नदीहरु समुद्र बन्न सकेका हुन्छन् ।
धर्तीमा थुप्रै नदीहरु छन् । नदीका तुलनामा समुद्र अत्यन्त थोरै छन् । नदीको कुनै हिसाब छैन । संसारभर हिसाब गर्ने नै हो भने पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नदीहरु रहेको तथ्याङ्क फेला पार्न सकिन्छ । जति नदीहरुको सङ्ख्या धेरै छ, त्यसको तुलनामा खोला र खहरेहरुको सङ्ख्या झन् धेरै छ । खोला र नालाका तुलनामा आकाशबाट बर्सने पानीका थोपाहरु अनन्त छन्, गनेरै नसकिने ।
जो जति विशिष्ट हुँदै जान्छन् ती त्यति नै सीमित हुँदै जान्छन्, थोरै हुँदै जान्छन् । आकाशबाट सोभैm बर्सने पानीका थोपाथोपा मिलेर सानासाना खहरे र नालाहरु बन्दछन् । ती सानासाना नालाहरु आपसमा मिसिएर खोला बन्दछन् । खोलाहरु बग्दै जाँदा आपसमा मिसिएर नदी बन्दछन् । विभिन्न मूलबाट बग्दै आएका अनेक नदीहरु सागरमा गएर मिसिन्छन् र कहिल्यै मिसिन नपर्ने गरी व्यापक बन्दछन् । जब नदीहरु परस्परमा मिल्दछन्, त्यसपछि उनीहरुको रुप परिवर्तन हुन्छ, नाम परिवर्तन हुन्छ र काम पनि बदलिन पुग्दछ ।
नदीका नामहरु उनीहरुले आपैmँले राखेका हुँदैनन् । मानिसहरुले राखिदिएका हुन्छन् । हामीले थाहा पाउनका लागि नदीहरुलाई नाम दिएका हौँ । नदीका ती नामहरु सागरमा गएर हराउँछन् र केवल ‘सागर’ नामलाई स्वीकार्न नदीहरु बाध्य हुन्छन् ।
नदीहरु कति जोडजोड कराउँदै आएका हुन्छन् समुद्रसम्म ! जब समुद्रमा आउँछन् अनि उनीहरुको बोली बन्द हुन्छ । कति जोडले दौडिँदै आएका हुन्छन् तर समुद्रमा आइसकेपछि उनीहरुको दौड पनि बन्द हुन्छन् । त्यतिधेरै नदीहरु छन् चर्कोचर्को आवाज भएका तर पनि कसैको कुनै आवाज सुनिँदैन । सबै मौन, सबै ध्यानस्थ ।
नदीहरु दौडने भनेकै समुद्र नबनुन्जेल रहेछ । नदीहरु बोल्ने भनेकै समुद्र नपुगुन्जेल रहेछ । समुद्रमा कुनै पनि कुरा गर्नका लाग बाँकी भएका हुँदैनन् नदीहरुका । सायद, ठूलाहरुको भाषा भनेकै मौन हो । समुद्रभन्दा ठूलो संसारमा के होला ? हीरादेखि लिएर मोतीसम्म सबैको साझा भण्डार हो, तापनि उसको शान्ति भङ्ग हुँदैन कहिल्यै । आपूmसँग हीरा र मोती छ भनेर समुद्रले आजसम्म कसैलाई फुर्ती लगाएको छैन ।
हजारौँ नदी र खोलानालाको आवाज खै कहाँ गयो होला ? समुद्रले आवाजको त्यो सघनतालाई आफ्नो गर्भमा समेटेर मौनता प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ । आवाज त खोला र नाला रहुन्जेल मात्र रहेछ, नदी र खहरे हुँदाको अवस्थासम्मका लागि रहेछ । समुद्र मौनताको नाम हो । मौनता समुद्रको सम्पत्ति हो । यही सम्पत्तिको प्रभावले होला ऊ यति शान्त र स्थिर छ ।
समुद्रलाई फेरि दौडनु छैन । चाहे जुनसुकै नदीहरु आऊन्, समुद्रको यो स्थिरता गुम्नेवाला छैन । समुद्रको शक्ति सबैको पहुँचभन्दा माथि छ । जति जोडले बग्दै आए पनि समुद्रमा आएपछि सबै शान्त हुन्छन् । समुद्रको परिवेश नै यस्तो छ कि कसैले पनि त्यहाँ हल्ला गर्ने आँट गर्दैनन्, कसैले पनि चकचक गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।
नदीहरुमा एक प्रकारको अतृप्ति हुन्छ । नदीमा भन्दा ठूलो अतृप्ति खोला र खहरेहरुमा हुन्छ । नदीहरु भन्दा छिटो खोलाहरु बग्दछन् । खोलाहरुभन्दा छिटो खहरेहरु बग्दछन् । ती खहरेभन्दा छहराछाँगाहरु छिटो बग्दछन् । छहराछाँगाभन्दा छिटो आकाशबाट पानी बर्सिएको हुन्छ । अर्थात् जो जति सानो हुन्छ, त्यसको गति त्यति नै तीव्र हुँदोरहेछ, त्यो त्यति नै अधीर हुँदोरहेछ ।
बाख्रापाठाका बच्चाहरु, गाईगोरूका बाछाबाछीहरु, चराचुरूङ्गीका बचेराहरु, मान्छेका केटाकेटीहरु सबै अधीर हुन्छन्, सबै अस्थिर हुन्छन् । जब मान्छे ठूलो हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै उसले बुझ्दै पनि जान्छ, ऊ भरिँदै पनि जान्छ । साना बालबालिका खाली आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई यो संसार अचम्मको लाग्दछ । उनीहरुको चञ्चलता जानकारी र बोधका लागि एउटा सुन्दर प्रयत्न हो । उनीहरुलाई यो संसारबाट धेरै कुरा पाउनुछ, यसैले ती यति चञ्चल छन्, यति धेरै अस्थिर ।
बालबालिकाका तुलनामा किशोरहरु शान्त हुन्छन् । किशोरहरुका तुलनामा युवायुवती शान्त हुन्छन् । युवायुवतीका तुलनामा प्रौढहरु शान्त हुन्छन् अनि प्रौढहरुका तुलनामा वृद्धवृद्धाहरु शान्त हुन्छन् । जतिजति प्राप्ति हुँदै जान्छ त्यतित्यति शान्तिको विकास हुँदै जान्छ । बालबालिकाको दौड जानकारीका लागि भएको दौड हो, प्राप्तिका लागि भएको दौड हो ।
सबै दौडहरु अतृप्तिकै कारण हुने गर्दछन् । जहाँ तृप्ति हुन्छ त्यहाँ दौड समाप्त भएका हुन्छन् । गन्तव्यमा नपुगुन्जेल बस र मोटरगाडीहरु कुदिरहने गर्दछन् । जब गन्तव्य आउँछ अनि उनीहरुको दौड पनि बन्द हुन्छ । बिहान ब्रह्ममुहूर्तसँगै चिरबिराउँदै ब्युँझने चराचुरूङ्गीहरु साँझ शान्त हुने गर्दछन् ।
बालबालिकाका तुलनामा तिनका अभिभावकले धेरै कुरा पाइसकेका हुन्छन् । आजका चञ्चल बालबालिका भोलिका शान्त अभिभावक हुन् । आजको उनीहरुको चञ्चलता त्यही शान्तिको प्रेरक पनि हो । अर्थात् जहाँ अतृप्ति छ, अभाव छ त्यहाँ चञ्चलता हुन्छ, अस्थिरता हुन्छ । जहाँ अस्थिरता हुन्छ र चञ्चलता हुन्छ त्यहीँ शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ ।
अर्को कुरा बोध पनि शान्तिको मुख्य कारण हो । बोध भनेको बुझ्नु वा जान्नु हो । बालबालिकाले भन्दा तिनका अभिभावकले जीवनबारे धेरै बुझिसकेका हुन्छन्, जानीसकेका हुन्छ । त्यसैले, केटाकेटीभन्दा अभिभावक तुलनात्मकरुपमा शान्त हुन्छन् । गौतम बुद्ध पनि मानसिकरुपमा असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो र नदीजस्तै उहाँ पनि निस्कनुभयो समुद्रको खोजीमा । धेरै दौडधुप गर्नुभयो र अन्ततः संसारलाई जान्न र बुझ्न सफल हुनुभयो । उहाँ त्यसपछि सिद्धार्थबाट बुद्धमा रुपान्तरित हुनुभयो ।
उहाँमा अब कुनै पनि अधीरता बाँकी रहेन । कुनै पनि अस्थिरता र दौड बाँकी रहेन । उहाँ पनि समुद्रजस्तै हुनुभयो– अत्यन्त शान्त, अत्यन्त मौन, अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त व्यापक, अत्यन्त गम्भीर ।
मानिसहरु बुद्धका अगाडि आउँथे । सबैले उहाँलाई सम्मान नै गर्थे भन्ने थिएन । गालीगलौचको भाषामा तथानाम भन्नेहरुसँग पनि उहाँ कुनै द्वेष गर्नुहुन्नथ्यो । उहाँलाई गाली र प्रेम उस्तै लाग्दथे । सबैप्रति एकै प्रकारको स्नेह र प्रेम थियो । अन्ततः बुद्धप्रति द्वेष गर्नेहरु पनि उहाँको मौनता र शान्तिको प्रतापले शिथिल हुनु पुग्दथे ।
समुद्रको आकारमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । समुद्रबाट जति घटायो त्यति नै बाँकी रहन्छ । जति थपे पनि बढ्दैन । उसले एउटा स्वरुप लिइसक्यो । थपघटका कुरा त नदी हुँदै भएका छन् । खोला र खहरे हुँदै बग्दाका दिनहरुमा जति दौडनुपर्ने हो त्यति दौड पूरा भइसकेको हुन्छ ।
समुद्रको व्यापकता नै वास्तवमा व्यापकता हो । कति चौडा छ समुद्रको छाती । हजारौँ नदीहरु अटाएका छन्, समुद्रको छातीभित्र । नदीसँगै तिनका अनेक रङ, अनेक ढङ्ग, अनेक रुप सबैसबै समेटेको छ समुद्रले आपूmभित्र । त्यति मात्र होइन, समुद्रमा आइसकेपछि सबै नदीले आआफ्ना चञ्चलता गुमाएका छन् । सबै नदीले अस्थिरता गुमाएका छन् र गुमाएका छन् सबैले जन्मदेखि सँगालेका दुर्गन्धहरु ।
समुद्र एउटा अवस्था हो । जो पनि समुद्र हुन सक्छन् । नदीहरु त्यही अवस्थालाई प्राप्त गर्न जन्मेदेखि दौडन्छन् रातदिन र अन्तमा सबैलाई छोडेर प्राप्त गर्दछन् समुद्रको व्यापकता । व्यापक हुन सबै त्याग गर्ने हिम्मत हुनुपर्दछ । नदीहरुले सबै त्यागेर बल्ल समुद्र भएका हुन्छन् । नदीहरु त्यतिकै बसेका भए पोखरी भएर एकै ठाउँमा बस्थे, समुद्र बन्न सक्ने थिएनन् । संसारमा पोखरीहरु कहिल्यै समुद्र बन्न सकेका छैनन्, त्यसैले ।
हामी पनि जन्मदेखि नै दौडिन सुरू गर्दछौँ तर कहीँ पुग्दैनौँ । जहाँको त्यहीँ, जस्ताको त्यस्तै हाम्रो जीवन सकिन्छ । जीवन पूर्णताको यात्रा हो तर थोरै मात्र जीवनको त्यो पूर्णतामा समेटिन सकेका छन् । हामी पनि दौडन्छौँ दौडन त तर नदीजस्तै व्यापक हुन सकेनौँ । नदीजस्तै स्वयम् समुद्र भएर त्यसको गहन गरिमालाई प्राप्त गर्न सकेनौँ ।
हाम्रो दौड हाम्रैवरपर केन्द्रित भयो । जहाँ जन्मियौँ त्यही भूभागभित्र हाम्रो आयु सकिन्छ । हामी नदीजस्तै निरन्तर गतिशील भएर समुद्रजस्तै शान्त र व्यापक हुन नसक्नुका पछाडि हाम्रो आसक्तिले काम गरेको छ । हामी हाम्रो नाम फेर्न सक्दैनौँ । ठाउँ फेर्न सक्दैनौँ । हामीलाई हाम्रो पहिचान प्यारो छ । हामीलाई जन्माउने हाम्रा मान्छे प्यारा छन् । देश प्यारो छ, भेष प्यारो छ । जात, वर्ण र लिङ्गको सीमा तोड्न हामीलाई गाह्रो छ ।
जसले जातीय घेरा तोड्न सक्दैन ऊ साझा हुन सक्दैन । हामीले आखिर यी सबैलाई छोड्नु त अवश्य छ तर पनि हामी छोड्न चाहँदैनौँ, किनकि यिनको ममत्वले हामीलाई बाँधेको छ । मानिसहरुले नदीलाई कति नाम दिएका थिए । एउटै नदीका समुद्रसम्म पुग्दा कति धेरै नाम हुन्छन् । नाम मात्र होइन, एउटा नदी जन्मिएको ठाउँबाट समुद्रसम्म पुग्दा कयौँ देशहरु भएर पुगेका हुन्छन् । जन्मेको देश छोड्दिनँ भनेर बसेका भए नदीहरु समुद्रमा बदलिन कहाँ सक्थे र ?
हामी पनि नदीजस्तै विशाल र व्यापक समुद्र बन्नुछ । जीवनको अर्थ नै असीम र अनन्त हुनु हो । समुद्रबाटै नदीको जन्म हुन्छ । समुद्रको बाफबाट जन्मिएको नदी बग्दै गएर अन्ततः आपैmँ स्रष्टामा बदलिएको हुन्छ । हामी पनि अनन्त हुनुछ, गहन, गम्भीर, शान्त र स्थिर हुनुछ । बुद्ध बन्नुछ । बुद्धत्व नै व्यक्तिको समुद्र हो । व्यक्ति कुनै एउटा परिवारमा जन्मन्छ र परिवारमा हुर्कन्छ तर त्यही परिवारको सीमाभित्र कैद भएर बस्नुहुँदैन ।
हामी बुद्ध हुनु भनेको हाम्रो परिवारको स्वरुपलाई अझ व्यापक बनाउनु हो । बुद्धको परिवार संसारमा बदलिएको थियो । परिवारको सीमित सङ्ख्या असीममा बदलिएको थियो । खुसीको सानो दायरा पनि व्यापक भएर गएको थियो । सिद्धार्थ हुँदा उहाँ लुम्बिनीमा रहेका उहाँका परिवारका मात्र सदस्य हुनुहुन्थ्यो तर बुद्ध भए पनि उहाँ संसारकै प्रिय हुनुभयो । उहाँको परिवारको संसारमा विस्तार भएर गयो । यही नै पूर्णताको प्राप्ति हो ।